Ciidamada Nabad Sugida oo gacanta ku dhigay Saraakiil iyo Dhalinyaro la sheegay in ay katirsanyihiin Shabaab « AYAAMO TV
Ciidamada Nabad Sugida oo gacanta ku dhigay Saraakiil iyo Dhalinyaro la sheegay in ay katirsanyihiin Shabaab
469 Views Date February 18th, 2014 time 12:00 pm
Ciidamada Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya ayaa howl galo balaaran ay sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay waxa ay gacanta ku dhigeen rag la sheegay in ay katirsan yihiin Al-Shabaab iyo dhoor gaari.
Ciidamada ayaa howlgalo qorsheesan waxa ay ka sameeyeen xaafado katirsan Degmooyinka Hiliwaa , Yaqshiid iyo Hodan , Howlgalka ayaa intii uu socday waxaa lagu soo qab qabtay rag katirsan AL-Shabaab iyo sadax gaari oo nuuc yar yarka ah.
Saraakiil katirsan Ciidanka Nabad Sugida ayaa ku waramay in raga la qab qabtay ay ku jiraan Saraakiil darajo hoose oo katirsan Al-Shabaab iyo dhoor dagaalyahan kuwaa oo ku dhuumaaleesanayay xaafado katirsan Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Nabad Sugida ayaa sidoo kale gacanta kusoo dhigay sadax gaari oo looga shakisan yahay in ay adeegsan jireen ragan lasoo xir xiray iyo Bambaanooyin macmal ah oo habeenadii dambe qal qalka lagu galiyay amaanka Magaalada Muqdisho.
Xubnaha la sheegay inay katirsan yihiin AL-Shabaab ee lasoo qabtay ayaan wali loo soo bandhigay Warbaahinta , Ragan la tuhmayo in AL-Shabaab katirsanyihiin ayaa hada ku xiran Xabsi Ciidanka Nabad Sugida ku leeyihiin Muqdsho waxaana ku socda baaritaano dheeraad ah.
Magaalada Muqdisho ayaa habeenadii dambe waxaa kusoo kordhay Dilal Qorsheesan , Qaraxyo iyo Weeraro toos ah kuwaa oo inta badan lagu eedeeyo in ay ka dambeeyaan Xarakada Al-Shabaab.